१५ प्रतिशतसम्म बढ्यो गाडी भाडा, कुन रुटमा कति पुग्यो ? - AP Khabar
१५ प्रतिशतसम्म बढ्यो गाडी भाडा, कुन रुटमा कति पुग्यो ?
एपी खबर २०७८ चैत्र २०, आईतबार (१ महिना अघि) ६८ पाठक संख्या
सरकारले अन्तर प्रदेश चल्ने लामा दूरीका सार्वजनिक सवारीको भाडा १५ प्रतिशतसम्म बढाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार यात्रुबहाक सवारीको भाडा १० प्रतिशतले बढाएको छ ।
पहाडमा मालबाहक सवारीका लागि १३ र तराईमा १५ प्रतिशतका दरले भाडा बढाइएको यातायानत व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
यात्रुबाहक तथा मालबाहकसहित पहाडी तथा तराई क्षेत्रका भूगोलअनुसार १० देखि १५ प्रतिशतसम्म भाडा बढाउने निर्णय भएको छ ।
दूधको उपभोक्ता मूल्य प्रतिलिटर नौ रुपैयाँले बढ्यो